kuvhuraSUSE Tumbleweed kwave kuri kwekutanga kugovera kupa Gnome 3.22 | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino takaona kuburitswa kwakakurumbira desktop yeGnome 3.22, vhezheni yakamutsa kufarira kwevakawanda pamwe nekukakavara kukuru pakati pevane maneja veprojekiti avo vanoda kuitisa Gnome 3.22 mune yayo inotevera vhezheni.
Sezvineiwo hondo kana kurwira kuti uwane zita rakadai rave VhuraSUSE Tumbleweed, chinwiwa chepamutemo kana musiyano weOpenSUSE iyo inozivikanwa nekupararira kwekuburitsa kugovera, vhezheni iyo mumaawa 48 chete yaita Gnome 3.22 pakati pevashandisi vayo.
OpenSUSE Tumbleweed haisiriyo yega yekuparadzira mukuita kuve neGnome 3.22
Iyo yepamutemo vhezheni yeOpenSUSE anga ari wekutanga kushandisa iyo nyowani desktop vhezheni yeGnome, asi handicho chete chinhu chitsva icho kugovera kunosanganisira, kuva zvakare yakagadzirisa iyo Linux kernel kusvika 4.7.4 uye iyo vhezheni yePlasma iyo inoparadzirwa ine, zvakare kuita iyo beta vhezheni yePlasma 5.8 pamwe neyazvino vhezheni yakagadzika yePlasma.
OpenSUSE Tumbleweed ndiyo yekutanga kugovera iyo Gnome 3.22 yakawanikwa zviri pamutemo, asi handiyo yega. Pakatenderedza nguva imwechete se OpenSUSE Tumbleweed, Debian Sid akaisanganisira iyi vhezheni yeGnome pamwe nekukurumidza (kana isati yatove nayo) iyo Anterior kugovera. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Gnome 3.22 inosimbisa iyo nharo pamusoro pekuti kutenderera kwekuparadzira kuburitswa kana kusimudzira kwetsika. Gakava iro vazhinji vanoedza kuvhura mumaprojekiti avo uye rave nenharo dzaro, zvakakwana kurangarira dambudziko raivapo pakati pematanho eUbuntu uye iro pakupedzisira vakasarudza kusimukira kwechinyakare.
Mhinduro yaOpenSUSE kune ino gakava yaive yaSolomonic, ndokuti, gadzira vhezheni iri kuburitsa kuburitsa, asi Izvi zvinobatsira zvakadii zvirongwa? Iwe unotove uine Gnome 3.22 mukugovera kwako? Wakamboedza kupihwa kupi kwekuburitsa kwekuburitsa? Wakafungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » kuvhuraSUSE Tumbleweed ndiko kugovera kwekutanga kupa Gnome 3.22
mumufananidzo iyo pani iri pamusoro ine imwe mweya wehunhu 2
Iyo mate desktop inoonekwa mumufananidzo, juasjuas
Pindura kuna Hermann
Une padiki sei danho rauinaro, nhau nezve gnome3 uye pikicha yeopuseuse ine mate desktop…. Iva akaomarara, kuti iwe usaite chero chinhu kunze kwekunge wakashama.
Ini ndinoshandisa manjaro, iyo inotenderera kuburitsa kunyangwe iine zvishoma zvekunonoka ne arch. Yangu kutora pane kutenderera kuverenga ndeyekuti:
A) Iwo anogona kushandiswa kana:
1- Chikwata chako chinofamba zvakanaka nemadhiraivha emahara.
2- Haisi bhizinesi muchina, sevha kana yakakosha komputa
B) Maitiro echinyakare anofanirwa kushandiswa kana:
1- Iwe unoda madhiraivha eimba.
2- Iri timu rebasa iro riri kutsoropodza chero kukundikana kwarinoita.
Muzviitiko izvi debian inogona kunge iri imwe nzira huru nekuda kwekutsigirwa kwayo kwenguva refu uye kugadzikana.
Iyo nyowani vhezheni yeLXQt desktop, vhezheni 0.11 yave kuwanikwa kune wese munhu